ထုတ်ကုန်အားလုံး - SHENZHEN KING OF SUN INDUSTRY CO.,LTD
SHENZHEN KING OF SUN INDUSTRY CO.,LTD [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer , Trade Company အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , Other Markets , West Europe , North Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:81% - 90% Cert:ISO9001, CE, Test Report
Home > ထုတ်ကုန်များပြရန်
ကြေးဝါကို Chrome- ချထားတဲ့အင်တုံပူရေအေးရောနှောထိပုတ်ပါ
တစ်ခုတည်းအပေါက်တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်အနိမ့်ကို arc ရေချိုးခန်း faucet
လူကြိုက်များတစ်ခုတည်းလက်ကိုင်ကြေးဝါ chromed မီးဖိုချောင်အအေး faucet
ရရှိနိုင်စတော့ရှယ်ယာထဲကနေတစ်ခုတည်းအအေးမီးဖိုချောင် faucet လှည့်
စီးပွားရေးလက်ဝါးကပ်တိုင်လိမ်တစ်ခုတည်း handwheel မီးဖိုချောင်အအေး faucet
7-shaped ကြေးဝါမီးဖိုချောင်ရောနှော faucet
လှည့်ထွက်ပေါက် - ပိုက်နှင့်အတူ Single- အအေးတိုင်မီးဖိုချောင် faucet
စက်ရုံတိုက်ရိုက်ကြေးဝါ gooseneck တစ်ခုတည်းအအေးမီးဖိုချောင်ထိပုတ်ပါ
အရောင်းအ ၀ ယ်မီးဖိုချောင်သုံးရောနှောစက်အသာပုတ်ပါ
ကြေးဝါခရိုမီယံနံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသည့်လက်နှိပ်နှိပ် Urinal Flush Valve
အရည်အသွေးမြင့်သောကြေးဝါရေချွေတာသည့် Handle flush valve
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: $35.00 - $41.00 Piece/Pieces
Supply နိုင်ခြင်း: 10000set/month
စျေးကွက်တွင်အင်တုံရောနှောသည့်ဆေးဆေးများအများအပြားရှိပြီးမရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားသည်။ လူတွေကဘယ်လိုရွေးချယ်ရမှန်းမသိဘူး။ စိတ်ပူစရာမလိုပါ၊ Handy သည်အင်ဆူလင်နှင့်သင်၏ရေချိုးခန်းအကျယ်အ ၀ န်းအရအင်တုံရောနှောမှုပုံစံကိုရွေးချယ်ရန် Handy ကကူညီနိုင်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်တုံကိုကော်လံအင်တုံ၊ စင်ပေါ်ရှိအင်တုံ၊...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: $27.00 - $33.00 Piece/Pieces
ရေကန်၊ ရေပူသို့မဟုတ်ရေရောသောရေနှင့်ရောသောရေများပါ ၀ င်သည့်ရေကန်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ယေဘုယျအသွင်အပြင်လက္ခဏာမှာရေထွက်ပေါက်နိမ့်ပြီးရေတိုစေသည်။ ၎င်းသည်လူအများစု၏အလေ့အထများအတွက်သင့်တော်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာများ၊ သွားတိုက်ခြင်းနှင့်အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ Handy ၏အင်တုံဆေးခလုတ်ကဲ့သို့ပင်...
aucet ့,fခေတ်သစ်အိမ်ထောင်စုလက်ဆေးအင်တုံရောနှောအများစုကြေးနီလုပ်နေကြတယ်, တချို့သံမဏိနဲ့လုပ်ထားတဲ့နေကြသည်။ ပြီးတော့လူအများစုက လက်ဆေးဆေးဘူး ကိုသုံးကြသည်။ Handy ၏ ကြေးဝါတစ်ခုတည်းအပေါက်အင်တုံရောနှော faucets ယေဘုယျအားဖြင့် ၄...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 23 - 29 / Set/Sets
Handy ၏တစ်ခုတည်းသောလီဗာအင်တုံ၏ထိရောက်သောဒီဇိုင်းသည်လူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုအတွက်သင့်လျော်သောလက်ကိုင်လက်တံကိုဖန်တီးပေးသည်။ သူသည်ကျိုးပဲ့မှု၊ အအေးနှင့်ရေပူ၏အပူချိန်ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်ညှိရန်လွယ်သည်။ မြို့ပတ်ရထားပုံသဏ္lာန်ချောဆီနှင့်အနားနှင့်ထောင့်များမပါ, ဒါကြောင့်သင်၏လက်ကိုထိခိုက်ပါဘူး။ ဒါဟာစတိုင်ကျလှပပြီး။ Handy...
ဤ Handy ပူနှင့်ရေအေးအင်တုံရောနှောသောဘောင်းဘီရှည်များသည်လွန်စွာရေပန်းစားသည်။ တူညီသောစီးရီးများတွင်ပိုမိုမြင့်မားသောရေကန်အင်တုံရှိ HN-3A32 လည်းရှိသည်။ ၎င်းသည်သွင်ပြင်ကျ။ လှပသောအသွင်အပြင်ရှိပြီးလှပသောပုံစံရှိပြီးသေးငယ်ပြီးထူးခြားသည်၊ ရိုးရှင်းပြီးကြော့ရှင်းသည်။ လူများသည်ဤ Xiaoman ခါးတစ်ခုတည်းအပေါက်ပါ ၀...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: $9.00 - $13.50 Piece/Pieces
Handy ၏အအေးခံမီးဖိုချောင်သည်အရည်အသွေးမြင့်သောကြေးဝါဆွဲငင်အားနှင့်ပေါင်းစပ်ပုံသဏ္selectionာန်ရွေးချယ်မှုကိုထိပုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် faucet အားပိုမိုတောင့်တင်းခိုင်မာစေပြီးအသုံးပြုမှုအတွင်းတည်ငြိမ်စေသည်။ Handy ၏တစ်ခုတည်းသောအအေးခံဘုံဘိုင်များသည်ပျားလပို့ bbeter ကိရိယာကိုအသုံးပြုသည်။ အပျက်အစီးများကိုထိရောက်စွာစစ်ထုတ်နိုင်သည်၊...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD9- 18 / Piece/Pieces
Handy သွန်းသော Brass Faucet တိုင်းသည်လက်ရာမြောက်ပြီးလက်ရာမြောက်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တစ်ခုစီတွင်တိကျသောစံချိန်စံညွှန်းများရှိသည်။ ရွေးချယ်ထားသောကြွေအဆို့ရှင်အမာခံသည်ချေးခြင်း၊ ခံနိုင်ရည်ရှိရုံသာမကစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သည်သာမကကြာရှည်စွာအသုံးပြုပြီးနောက်လည်းပျက်စီးရန်သို့မဟုတ်ယိုစိမ့်ရန်မလွယ်ကူပါ။ Handy...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 10 - 15 / Piece/Pieces
ယနေ့ခေတ်တွင်လူအများစုကမီးဖိုချောင် faucet ၏ပုံစံသည်မီးဖိုချောင် ၀ ယ်သည့်အခါမီးဖိုချောင်၏အလှဆင်ခြင်းနှင့်သဟဇာတမဖြစ်၊ အောက်တွင် Handy သည်သင့်အတွက်အကြံဥာဏ်အချို့ပေးပါလိမ့်မည်။ မော်ဒယ်ရွေးချယ်မှု - ခေတ်သစ်ရိုးရှင်းသောမိသားစုမီးဖိုချောင်များသည်ရိုးရှင်းသောစတိုင်များ၊ ခရိုမိုးမျက်နှာပြင်၊ တစ်ကိုယ်တည်းမီးဖိုချောင် faucets...
မီးဖိုချောင် faucets ပွင့်လင်းရန်နည်းလမ်းဖွင့်ဖိနှိပ်, helical အမျိုးအစား, spanner အမျိုးအစား, စောင့်ဆိုင်းရန်ပွင့်လင်း type ကိုသယ်ဆောင်နှင့် induction အမျိုးအစားကိုခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ လိမ်မီးဖိုချောင် faucet switch သည်အခါ, ကလုပ်ကိုင်ရန်လက်ကိုင်လှည့်ရန်လိုအပ်ပါသည်; Handy...
Handy ၏တစ် ဦး တည်းသောအအေးမီးဖိုချောင်စုပ်စက်သည်နံရံတံခါးဖွင့်ခြင်းအတွက်သင့်တော်သည်။ သင်သည်မည်သည့်ထောင့်နေရာတွင်မဆိုသန့်ရှင်းရေးကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်လိုအပ်သည့်အတွက်စတိုင်လ်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည့်မီးဖိုချောင် faucet ၏စတိုင် ၇- ပုံစံထွက်ပေါက်ပိုက် ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်နိုင်သည်။...
ငါတို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများ၏အိမ်တွင်းမီးဖိုချောင်တံတိုင်းအားလုံးနီးပါးသည်ယခုအခါ ရေပူနှင့်ရေအေးကြေးဝါဆေးများ ကိုအသုံးပြု နေသည်။ အဘယ်ကြောင့်လူအများစုက အပူနှင့်အအေးမီးဖိုချောင်သုံးရောနှောထိပုတ်ရန် ပိုနှစ်သက် ကြသနည်း။ အကောင်းတစ် ကြေးဝါမီးဖိုချောင်သုံးရောနှောထိပုတ်ပါ ရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လို ? ကြည့်ကြရအောင်...
အသစ်နှင့်လက်တွေ့ထုတ်ကုန်များစွာကိုဖန်တီးရန်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအယူအဆ၊ ၁၅ နှစ်တည်ထောင်ခြင်းကိုလွယ်ကူစွာလိုက်နာပါ။ အနက်ရောင်နှင့်ရွှေရောင်မီးဖိုချောင်သုံးဆေးကြောစက်သည် HN-3C70BG-1 အနက်ရောင် high-arc ပြွန်ကိုယ်ထည်ကိုချောမွေ့သောအသွင်အပြင်သာမကအေးဆေးတည်ငြိမ်သည့်အပြင်ပုံသဏ္5ာန် ၅ လွှာအထိမျက်နှာပြင်သုတ်ဆေးကိုအသာ ပုတ်...
min ။ အမိန့်: 300 Piece/Pieces
တစ်ခုတည်းသောအအေးခံတိုင်များတွင်ယေဘုယျအားဖြင့်ရေ ၀ င်ပေါက်တစ်ခုသာရှိသည်။ များသောအားဖြင့် ရေငတ်သောရေငုပ်များဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ရေအေးနှင့်ရေပူအတွက်အ ၀ င်ပိုက်များ။ ယေဘုယျအားဖြင့်စံဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းသည်အပူနှင့်ညာအအေးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Handy ၏မီးဖိုချောင်စုပ်စက်ရောနှော faucet ကို ၀...
Handy ၏ gooseneck တစ်ခုတည်းသောအအေးမီးဖိုချောင်ဘောင်းဘီ၏ spout တွင်ပျားလပို့bbator နှင့်အောက်စီဂျင်ကြွယ်ဝသောပူဖောင်းရေထွက်ပေါက်ဒီဇိုင်းတပ်ဆင်ထားသည်။ ရေထဲသို့လေထဲသို့ထိုးသွင်းခြင်းဖြင့်ရေမှုန်ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ပါ။ ၎င်းသည်အဝတ်များကိုအဝတ်လျှော်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးရုံသာမကရေကိုသက်သာစေပြီးငွေများစွာသက်သာစေသည်။ Handy ၏တစ် ဦး...
Handy ၏ခေါက်နိုင်သောမီးဖိုချောင်ဘောင်များသည်လက်နှစ်ချောင်းဖြင့်ရေပေးဝေမှုပမာဏနှင့်အပူနှင့်ရေအေးတို့၏အပူချိန်ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ ထွက်ပေါက်ပိုက်ခေါက်နိုင်ပါတယ်, ရေထွက်ပေါက်၏ညှနျကွားကိုသင်ကြိုက်သလောက်ပြောင်းလဲနိုင်သည်နှင့်သေလွန်သောသူတို့သည်ထောင့်သန့်ရှင်းရေးကိုလည်းအလွန်အဆင်ပြေသည်, ထွက်ပေါက်ရေချောမွေ့ပျော့ပျောင်း,...
Faucet ထုတ်လုပ်သူ Handy Sanitary Ware သည်ထိုအချိန်ပြည့်မိခင်များနှင့် အိမ်ရှင်မများအားသူတို့၏ဘ ၀ တွင်ပိုမိုပျော်ရွှင်ရန် မည်သို့ကူညီနိုင်မည်နည်းဟုစဉ်းစားနေသည် ။ ဟေး၊ ရုတ်တရက်ဆိုသလို၊ မိခင်များသည်မီးဖိုချောင်နှင့်မလွှဲမရှောင်ရုန်းကန်ရလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် မီးဖိုချောင်တွင် မိခင်များကိုချစ်ခင်မိခင်ဖြစ်စေရန် Handy...
Handy ၏ခေတ်သစ်ကြေးဝါမီးဖိုချောင် faucet လက်ကိုင်များနှင့်သူတို့၏အလောင်းများကိုများသောအားဖြင့် Chrome ဖြင့်သုတ်လိမ်းထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောနည်းပညာကြောင့်မီးဖိုချောင်ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုလွယ်ကူစေသည်။ Handy သည် ၅ နှစ်အာမခံနှင့်အတူကြွေအဆို့ရှင်အမာခံကိုတမင်တကာရွေးချယ်ခဲ့သည်။ Handy...
Kitchen Mixer Taps များ အပြင် Handy တွင်လည်းရေသန့်စက်ပါရှိသည်။ ပုံမှန် မီးဖိုချောင် faucets များအပြင်ရေစစ်ခြင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်လည်းရှိသည်။ ကောင်တာအောက်တွင် filter element တစ်ခု (water filter)၊ built-in ရေ filter element များပါ ၀ င်သောမီးဖိုချောင် faucet စသည်တို့ကိုတပ်ဆင်ပါ။ ထို့အပြင် multifunctional stainless steel...
Handy ၏ Button-type Urinal Flush Valve သည်နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်းကိုစာနယ်ဇင်းစမ်းသပ်မှုပေါင်းတစ်သန်းကျော်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ urinal တိုးခြင်းနှင့် thickening ကြေးနီအဆို့ရှင်နှင့်အခွံမာသီး အတွက် Manual Flush Valve သည် ချောချောမွေ့မွေ့မြန်ဆန်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီးသက်တမ်းပိုရှည်သည်။ Handy's...
Handle flush valve ကိုလည်း hand shake flush valve ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူ။ ၀ တ်ဆင်နိုင်ပြီးကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ Handy ၏ အရည်အသွေးမြင့်သောကြေးဝါလက်ကိုင်အိမ်သာ flush အဆို့ရှင် သည်အထက်ပါအင်္ဂါရပ်များသာမကဘဲအချိန် - နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုပိတ်ခြင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်လည်းရှိသည်။ ၎င်းသည်ရေကို ၃-၈...
Handy's ၏ အားလုံးသောကြေးနင်းအမျိုးအစားနောက်ကျသော flush အဆို့ရှင် သည်မြင့်မားသောသန့်ရှင်းသောကြေးဝါဆွဲငင်အားနှင့်တိကျမှန်ကန်သောစက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ခြေလျင်လည်ပတ်နိုင်သော အိမ်သာအဆို့ရှင် သည် Handy ၏ထူးခြားသောအဓိကနည်းပညာ - ကြေးနှောင့်နှေးမှုအလိုအလျှောက်ပိတ်သောအဆို့ရှင်အမာခံရှိပြီးအလိုအလျောက်ပိတ်ချိန်သည် ၃-၈...